Wasiirka Horumarinta Jidadka Miyiga iyo Magaalada DDS oo La Kulmay Jaaliyada ku Dhaqan Hargaysa |
Wasiirka Horumarinta Jidadka Miyiga iyo Magaalada DDS oo La Kulmay Jaaliyada ku Dhaqan Hargaysa
Hargeysa (NogobNews) 04/10/2011 Wafti uu hogaaminayay Wasiirka Wakaalada Horumarinta Jidadka Miyiga iyo Magaalada DDS Mudane KHadar Cabdi Ismaaciil ayaa booqasho hawleed ku tagay Somali-land gaar ahaan magaalada Hargaysa halkaasoo ay kulan balaadhan ugu qabteen jaaliyadda hargaysa,Ganacsatada iyo Dhamaanba dadka ka soo jeeda DDS ee ku dhaqan Hargaysa.
Kulankan oo ay ka soo qaybgaleen dad aad u badan oo asalkoodu ka soo jeedo DDS ayaa uu Wasiirku kala hadlay Dhinaca ka qaybqaadashada Horumarka iyo Nabadgalyada ka Curatay DDS,loona baahan yahay in laga wada qaybqaato.
Mudane Khadar ayaa Tibaaxay in loo Baahan yahay in Shacabka Deegaanku Meel kasta oo ay ku nool yihiinba ay waajib ku tahay muujinta Doorka kaga aadan ka qaybqaadashada Nabadgalyada iyo horumarka jiritaanka umadeed ee DDS.
Sidoo kale wasiirka ayaa carabaabay in jaaliyada hargaysa iyo shacabka kale ee danaha kala duduwan u yimaada magaalada hargaysa in loo baahan yahay in ay kaalintooda muujiyaan dareen-wadaniyadeedna kaga hortagaan wax kasta oo carqalad ku ah jiritaankeena Qaran Dawladnimo,si loo sugo nabad iyo xasilooni waarta oo ka hanoqaada DDS.
Dhanka Kale qaar ka mida jaaliyadda iyo ganacsatada ku nool hargaysa oo ka hadlay Kulankaas ayaa daaha ka qaaday in shakhti kasta oo ka soo jeeda DDS ay la gudboon tahay in door firfircoon uu ka qaato Sugidda Amniga iyo Taabo-galinta Horumarka.
Sidoo kalana Tilmaamay in Dawladnimada Maanta la Haystaa tahay mid dhamaan shacabka ilowsiisay tiiraanyadii iyo Hagardaamooyinkii ay ina dhaxalsiiyeen Talisyadii Faashiistiga ahaa,kuna tilmaamay in dawlada DDS ay tahay Iftiinka Rajada Umada Shacabka DDS loona baahan yahay in la koolkooliyo lagana ilaashado daranyada,Deelqaafka iyo Turunturooyinka ay wadaan Maangaabiinta UBO.
Kulankan ayaa si qotodheer loogu wada-falanqeeyay hagardaamooyinka tabarta Daran ee ay yagleelayaan Awr-kiraalayaasha Asmara ee Caadaystay ka ganacsiga Dhiigga Da’yarteena Anfici lahayd Dalkooda iyo waalidkii Dhalayba.
Ugu danbayntii ayaa uu kulankani ku soo gabagaboobay is-afgarad,hala yeelo iyo Hawraarsan iyo balanqaad lagu wada astaystay in Doorka Jaaliyada Hargaysa uu Noqdo mid buuxin doona kana soo dhalaali doona Doorka kaga aadan Horumarka iyo Nabadgalyada DDS,halkaasoo laga dhisayna gudiyo isku dubaridi doona iskuxidhka Jaaliyadda Iyo Xukuumada DDS